Waxa La Igu Takooray Dadayda Hala iga Bedelo - Xogside
Home WARARKA CAALAMKA Waxa La Igu Takooray Dadayda Hala iga Bedelo
Waxa La Igu Takooray Dadayda Hala iga Bedelo
Emile Ratelband, oo u dhashay dalka Holand da’diisuna gaadhay 69 sano, ayaa ka codsaday maxkamadda in laga badalo taariikhda dhalashadiisa oo hoos loo dhigo 20 sano si uga fogaado takoor iyo faquuq loogu geysanayo da’diisa.
Isagoo Waraysi siinaya Tvga- BBC News ayaa yidhi :” Waxaan noolnahay waqti aad beddeli karto magacaaga oo aad beddeli karto jinsigaaga (lab iyo dhedig), Maxaan u go’aansan waayey inaan bedelo da’dayda”?
Laakiin maxkamadda dalkaasi ayaa ka diiday codsigiisa, waxaana ay iftiimisay in xuquuq badan oo sharciga ah ay ku saleysan tahay da’da qofka, haddii la bedelona ay ay sababi karto dhibaatooyin badan.
Maxkamadda ay intaasi ku dartay in jirin aasaas sharci oo lagu sameeyo is-beddelkan oo kale. Waxaana ay si kooban ugu dhawaaqday : “Mr Ratelband waxa uu xor u yahay inuu dareemo oo uu is aaminsiiyo in 20 sano uu ka yaryahay da’diisa dhabta ah, taasina uu ku hawlgal oo iska saaro cuqdada,”.
Garsoorayaasha ayaa sheegay, in bedelida dukumiintiyadiisa sharciga ah ay leeyihiin saamayn sharci iyo mid bulsho isla markaana ay da’du u tahay udub dhexaad aan la taaban Karin.
Mr Ratelband, oo isku magacaabay “tababaraha waxtarka leh”, ayaa cinwaannada ugu waaweyn adduunka ku soo bandhig codsigan yaabka leh.
Dhageysiga maxkamadda ka hor , waxa uu sameeyay kulanka TV-ga iyo muuqaalada kale ee saxaafada kala duwan, isagoo sheegay inuu dareemayo in lagu takooray shaqooyinka iyo barnaamijka caanka ah ee haasawaha ee Tinder. Waxa kale oo uu intaasi raaciyay in dhakhaatiirtiisu ay u sheegeen in jidhkiisu uu la mid yahay sida qof 40-jir ah.
Odayga da’diisa dhibta kala kulmay ayaa yidhi :” “Haddii aan ahay 49 sano, markaa waxaan iibsan karaa guri cusub, wadi karaa gaadhi kale. Waxaan qaban karaa shaqooyin dheeri ah, iyo wax badan oo kale”.
Maxkamadda ayaa iyaduna dacawadan ku soo koobtay : in taariikhda dhalashadu ay xidhiidh la leedahay waayaha nolosha ee qofka iyo isbedelada ku dhacaya sida xuquuqda cod bixinta, xuquuqda guurka, bilaabidda waxbarashada iyo shaqadaba iwm.
Sidaa awgeedna aanay suurtagal ahayn in la bedelo taariikhdaasi. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in ninkan ka cabanaya faquuqa da’da ay ka khatar badan tahay arrinta haddii la ogolaado taasi oo furayso albaab aan cidina xidhi Karin oo halis.
Marka oday 80 jir ah oo hawlgab noqoday 15 sano ka hor uu bedelo da’da ee shaqo soo doonto isagoo oo ay qoran tahay da’da 40 sano sidee ayaa xal looga gaadhay, ama dhinaca kale in qof da’ yari uu qorto da’da halwgabka ee 65 sano si uu shaqada uga fadhiisto.
Previous articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Qaabiley Xildhibaankii U Horeeyey Ee Isagoo Madaw Ah Ku Soo Baxa Golaha Wakiilada Dalka Finland
Next articleNiyada Iyo Risiqa Waa Ay Isku Xidhan Yihiin